ခေါင်းအုံး Box ကို
အံဆွဲ Box ကို
အဖုံးနှင့် Base စက္ကူ Box ကို
မြှောင်းပုံ Box ကို
အနက်ရောင်လက်ကား Custom Custom Premium ဇိမ်ခံကတ်ထူပြားစက္ကူလက်ဆောင်အဝတ်အစားထုပ်ပိုးသေတ္တာ
စိတ်ကြိုက် Logo ဇိမ်ခံကတ်ထူပြားမှ Magnetic ခေါက်လက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်ဖဲပိတ်ခြင်း
စိတ်ကြိုက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း Logo အဖြူရောင်အလယ်အလတ်အရွယ်သံလိုက်ခေါက်လက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခု
Flap Lid ထုပ်ပိုးကတ်ထူပြား Bespoke စိတ်ကြိုက်သံလိုက်ပိတ်ထားသောအမြှုပ်ထည့်ပါလက်ဆောင်သေတ္တာ
Glossy Lamination နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစိတ်ကြိုက်ခေါက်နိုင်သောကွတ်ကီးများအံဆွဲစက္ကူသေတ္တာကိုထုပ်ပိုး
Guangzhou Ouhai ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
နာမည်: Xu Bao
ဖုန်း: +86 15815880089
လိပ်စာ: RM702, Nansonghui အဆောက်အအုံ, Gongye Ave No.656. တောင်, 510288 Haizhu ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး ,တရုတ်.
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်း 250gsm အနုပညာစက္ကူ, သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကတ်ထူပြား / အထူးစက္ကူအရွယ်အစား 30x15x6cm, 30x20x6cm, 33x25x7cm သို့မဟုတ်ထုံးစံပုံနှိပ် CMYK4အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း, သို့မဟုတ်ထုံးစံ Surface Disploss Glossy, သို့မဟုတ် Matte ကိုင်တွယ်ဖဲကြိုး, သို့မဟုတ်ထုံးစံအသုံးပြုမှုဆံပင်အစုအဝေး, အဝတ်အစား, လက်ဆောင်ထုပ်ပိုး MOQ 1000pcs ငွေပေးချေမှုကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်, T / T , Paypal, Western Union ဦး ဆောင်သည့်အချိန်…
ထုံးစံခေါင်းအုံး Box ကိုဇိမ်ခံကား3လက်ကိုင်နှင့်အတူဆံပင် extension ကိုထုပ်ပိုး Box ကို Bundles
ကုန်ပစ္စည်း Parameters အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အမှာစာမှာမျက်နှာပြင်ကုသမှုခံယူခြင်း, Glossy Lamination, Matt Lamination, ပုံနှိပ်ခြင်း, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Varnishing Heidelberg အရောင်ခြောက်ရောင်ပေါင်းရေပုံနှိပ်စက်အသစ်ကိုပုံနှိပ်ခြင်း, Two- အရောင် Roland, လေးအရောင်စက်, Heidelberg monochrome စက်, 6-ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊, အလိုအလျောက်အပြည့်, Semi-Automatic မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်များ Foil-Stamping Finishing, ဖောင်းကြွ, Glossy Lamination, Matt …
ဘရာဇီးလ်ဆံပင်အစုအဝေးအတွက်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်လက်ကိုင်များပါ ၀ င်သောထုံးစံအရအနက်ရောင်အစုလိုက်ဆံပင်ဖြည့်တင်းခေါင်းအုံးသေတ္တာများနှင့်အတူဆံပင်တုကိုထုပ်ပိုးထားသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်များရှိသည်. ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမိန့်တိုင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်. အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်ပါပြီ, Glossy Lamination, Matt Lamination, ပုံနှိပ်ခြင်း, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Varnishing Heidelberg ခြောက်အရောင်ပေါင်းအသစ်ကိုပုံနှိပ်ခြင်း။
လူကြိုက်အများဆုံး Custom Logo Virgin Human Hair Bundle ဆံပင်တုအတွက်ဆံပင်ဖြည့်တင်းထုပ်ပိုးခြင်းအိတ်ဆောင်
ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်, အများဆုံးအဆင့်မြင့် Pre- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ,ပုံနှိပ်, ပုံနှိပ်ပြီးနောက်ကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာလက်ဆောင်သေတ္တာများဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်လက်ရာမြောက်သောလက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ, ရတနာသေတ္တာ, စက္ကူလက်ဆောင်သေတ္တာ, ကတ်ထူပြား, စက္ကူဘူး, ပုံးပုံး, ချောကလက်သေတ္တာ, မြှောင်းပုံသေတ္တာ, ထုပ်ပိုးသေတ္တာ, စက္ကူထုပ်ပိုး, စက္ကူအိတ်, လက်ဆောင်အိတ်,နှင့်စျေးဝယ်အိတ်,နာရီလေးထောင့်ကွက်, အလှကုန်သေတ္တာ,…
လိပ်စာ RM702, Nansonghui အဆောက်အအုံ, Gongye Ave No.656. တောင်, 510288 Haizhu ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး ,တရုတ်.
Guangzhou Ouhai ပုံနှိပ်ပစ္စည်း Co. , Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး